Wasiirka Warfaafinta: “Ciidamadu waxa ay badbaadiyeen in ka badan 50 qof” SAWIRRO – Radio Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta: “Ciidamadu waxa ay badbaadiyeen in ka badan 50 qof” SAWIRRO
Wasiirka Warfaafinta ee xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in ciidamada amniga ay guuleysteen inay soo badbaadiyaan in ka badan 50 qof oo isugu jiray diblomaasiyiin, ganacsato, siyaasiin, dhaqaatiir iyo shacab kale, kaddib markii ay ciidamada amniga ay soo gabo gabeeyeen howlgallo ka dhan ah weerarkii maleeshiyaadka Shabaab ay ku soo qaadeen Hotelka Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho.
“Shan ilaa iyo lix qof ayay ahaayeen oo dhabarka dambe ee Hotelka ka soo galay, ciidamada wax fursad ah ma u siinin maleeshiyaadka Shabaabka inay dadka laayaan, waxaa la badbaadiyay in ka badan 50 qof, oo isugu jira diblomaasiyiin, ganacsato iyo tiro kale oo shacabka, ficilkaasi argagixisada waxaa ku dhintay 14 qof, oo uu ku jiro safiirkii Soomaaliya ee magaalada Geneva Danjire Bari bari” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ammaan u jeediyay ciidamada amniga ee dowladda, kuwaasi oo uu ku sheegay inay qabteen howl adag oo ay ka mira dhaliyeen tallaabadii ay qaadeen, waxaana uu shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo si wada jir ah looga hortago ficilada argagixiso ee ay maleegayaan Ururka Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed.
“Wixii dalka caafimaadkooda wax looga qaban waayo caafimaad dibada ah ayaan u qaadaynaa, waxaana u taaganahay sidii aan bulshada ugu adeegi lahayn, shacabka iyo ehelada waxaan uga tacsiyadeeyneynaa dadkii weerarkaasi ku dhintay” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta oo ay wehliyaan Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini iyo mas’uuliyiin kale oo gaaray Hotelka.
Gureey Xaaji Xasan oo ah milkiilaha Hotelka Maka Al-mukarama ayaa ciidamada ammaanka uga mahadceliyay howlgalkii ay ku soo gabo gabeeyeen maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday Hotelka, kuwaasi oo gabi ahaanba la laayay.
Wasiirka kalluumaysiga “ waxaan wadnaa sare u qaadista xirfadd layaasha kalluumeysatada”
Madaxweyne Xasan oo la kulmay madax kala duwan & shir madaxeedka Jaamacadda Carabta oo furmay